Samabesi khabar | Samabesi khabar - केपी ओलीको प्रचण्ड र माधव नेपाललाई व्यंग्य - आज बाउ र श्रीमतीको मुख हेर्ने दिन हो ?
केपी ओलीको प्रचण्ड र माधव नेपाललाई व्यंग्य - आज बाउ र श्रीमतीको मुख हेर्ने दिन हो ?
प्रकाशित मिति: आश्विन ०३, २०७८
काठमाडौं,३ असोज । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एकिकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललाई व्यंग्य गरेका छन् । आइतबार संविधान दिवसको अवसरमा पार्टीले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै ओलीले संविधान दिवसको दिन शहिदका आमाबुबाले गर्व गर्न पाउनुपर्नेमा आफ्ना बुवा र श्रीमतीलाई सम्मानीत गरिएको बताए ।